Qi Gong chii? Utano hwakanaka kufungisisa
Qi Gong | Health Wellness Kufungisisa
Kusiyana kwakabva shure kwekutora nguva
Qi Gong anozivikanwa
Chero ani zvake anofarira maAsia martial arts nhasi achakurumidza kuwana. Izvo zviyero zvakanaka, zvinodawo saizvozvo. Asi kusiyana somuenzaniso muna Japanese Aikido, wokuChina Gong Fu kana Kung Fu anounza zvimwe zvakanakira. Nokuti art Kung Fu - kungava muBhudha Shaolin kana Wudang Taoist Kung Fu - kunosanganisira chinhu iwe saka kuwana mamwe zvombo. Inonzi Qi Gong.
Qi Gong ishoko rinobatanidza rakabva mumakore e1950. Pasi pane zvose zvidzidzo zvinovhiringidza nekusimbisa Qi, simba rehupenyu. Zvakawanda zvezvikoro zvinopfuura makore ane chiuru. Kunyangwe nemamonki kubva kumaBuddhist akare uye maDaasist vanonzi Daoist vaiita zvidzidzo.
Qi Gong anovhima muzvisikwa
Zvisinei, Qigong haisi kungoita basa rinokosha muchiChinese martial arts, asiwo mumutauro weChina mushonga, kana kuti TCM kwenguva pfupi. Ikoko inoumba imwe yemichero shanu iyo TCM inovaka. Zvimwe zvakasiyana zvinosanganiswa nekuumba kubatana. Izvi zvinosanganisira kusununguka, rugare uye kusika, pamwe chete nekufema, kufema uye kufunga kwepfungwa. Kusiyana nekufungisisa, pano kufamba kunobatanidza nekuzorora. Kufema kunoitika muhukama, kufamba kunofamba uye kunonoka.
Kunyange zvazvo pane izwi rekuti vose vashandise pamwechete, Qi Gong yakasiyana chaizvo. Nhamba chaiyo yezvidzidzo hazvizivikanwe. Izvo zvakasiyana-siyana zvekudzidzira zvinogona kutsanangurwa nemitemo yakawanda yakaitika kwemazana emakore. Masters muChina chekare vakapfuura maitiro avo pachavo maitiro chete kuvadzidzi vavo. Ivo vakashandura uye vakagadzira pfungwa yavo yekuita basa. Mukuwedzera, mazano akawanda matsva akawedzerwa kuti aite Qigong kuve nyore kusvika kune vanhu vakawanda veEurope neAmerica.
QiGong maitiro ekuchengetedza mukati
Pasinei nezvakasiyana-siyana, zvose Qi Gong maitiro ane chimwe chinangwa: kuenzanisa Qi mumuviri. Zvisinei, zvinosarura kuti unoita maitiro api. Izvo zvinoshandiswa zvinoratidzirwa kune mamwe magetsi emvura, meridians, mumuviri womunhu. Somugumisiro, migumisiro yezvidzidzo zvakasiyana.
Kubva dzidziso TCM chinoratidza kuti hapana chete chete mhando Qi, asi zvakawanda: The kufema Qi, kuzvidzivirira Qi, zvokudya qi, meridians qi, uye nhengo-Qi, izvo neimwe kupinda Maviri akaparadzaniswa. Mhando dzose dzeKi dzinogona kuwana dhimony, iyo dzimwe nguva ingadzoserwa kuenzana. Zvisinei, izvi zvinoda kushandiswa kwakakodzera kwechirwere chinopiwa.
Kazhinji, Qi Gong akanyatsoiswa kudzidziswa kuti munhu anogona Zvisinei tsika pasina zivo pachavo mifananidzo kusawirirana ikoko,. The adzidziswa Martial Arts Qi Gong anokanda zvakare kufunga panguva kuunza Qi of mudzidzi kunzvimbo kuitira kuti aurayiwe Kung Fu zvikuru simba uye akasimba.
Zvimwe zvedzidzo zvakawana ruzivo rwekuziva uye zvinodzidziswa kazhinji. Izvi zvinosanganisira sere brocade Muchiitwa 18 fambisa Taiji Qigon, Ba Fanhuangong, Chan Mi Gong, vemakumi kufungisisa 5 nhengo Qigong, nyama yemhuka 5 mhuka kana Meridian Qigong.
Mhando dzeQi Gong dzinopesana kwete chete mukugadzirisa uye kurongeka kwezvidzidzo, asiwo mune zvakabva. Kungofanana neKung Fu, Qi Gong zvakare inotungamirirwa nehukuru hwezvitendero zvikuru zveChinese Buddhism uye Daoism. Mune mamizinda eDaoist kuWudang-Shan, hauzombofi wakadzidziswa Buddhist Shaolin Qi Gong uye zvakasiyana.
Muenzaniso weBuddhist Qi Gong ndiyo Chan Mi Gong. Izvi zvinonziwo spinal qigong. Izvozvi, mumhando iyi, musana wechipfuva unofambiswa nebatsiro rekuzungunuka-kufanana nemapulses. Chikamu chinozopedzisira chichiendesa kune muviri wose.
Sei tichifanira kudya miriwo?
Muenzaniso weDaoist Qi Gong ndeye gumi kufungisisa kubva paGomo reWudang. Muchiito ichi, chinangwa chichava pamusoro peshoko reDaoist rekuyera kwekupesana. Pakati pekuita basa ndeye "Maruva eLotus inotanga", izvo hazvisi kungoita basa remuviri asi zvinosanganisira zvekunamata.
Zvinotora ruzivo rwakawanda uye unodzidzira kuziva nyaya yacho zvakanaka. Iko chiChinese nekufungisisa nekugadzirwa kwezvenhau kune shanduro dzakasiyana-siyana semakore ekufambisa uye ukuru hweChina kuchibvumira. Kunyange zvakadaro, kune vanotanga, chero rudzi rwe Qi Gong rwakatanga rwakakodzera. Pakupedzisira, zvose zvinodzidzisa zvine chinangwa chimwe chete: zvakaenzana Qi kuenzana mune imwe.
Mura wehutano hwakanaka uye hwakanaka
Yoga | Mitambo uye utano
Relaxation techniques | Utano hwakanaka
Sauna - kuruvara uye zvakanaka
Ita mabhora ekugeza iwe pachako | Wellness DIY